CityLife Apartment - induduzo yokuhlala esikhungweni
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ewa
Ngikumema ukuthi uvakashele e-Lublin futhi uhlale endlini ethokomele engu-2 CITYLIFE Apartment ehlanganisa igumbi lokuhlala elinekhishi elinempahla, igumbi lokulala elinemibhede emibili noma umbhede owodwa ophindwe kabili kanye negumbi lokugezela elihlukile. Ifulethi lise-Centre, liqinisekisa ukutholakala kwezindawo eziheha izivakashi, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela. Ukunakekela okukhulu ekuhleleni ifulethi kuqinisekisa ukuphumula ngemuva kosuku lwebhizinisi olumatasa noma ukubuka indawo okusebenzayo edolobheni lethu elihle.
Ifulethi lisendaweni ephakeme ephansi. Indawo yabahamba ngezinyawo ingafinyelelwa ngezinyawo ngemizuzu eyi-10. Ifakwe umshini wokuwasha izitsha, isiqandisi, i-induction hob, i-microwave, umshini wekhofi. Indlu yokugezela ineshawa nomshini wokuwasha. Ama-TV amabili esikrini esiyisicaba - egumbini lokuphumula nasekamelweni.
Ifulethi lisenkabeni yedolobha, eduze kommeleli weLitewski Square (imizuzu eyi-10 ngezinyawo), lapho ungahamba khona uye eDolobheni Elidala. Phakathi nemizuzu eyishumi nambili ungahamba uye ezikhungweni zezemidlalo zeLublin Fair kanye neLublin - i-AQUA Lublin, inkundla yezemidlalo, izindlela zamabhayisikili. Okufanelekile ukuvakashelwa yiSikhungo Somhlangano Wamasiko endaweni eyi-1 km (imizuzu eyi-12 ngezinyawo). Endleleni, singakwazi ukuthenga e-Plaza Shopping Centre - 550m (7 min. Hamba)
Ngiyajabula ukunikeza amathiphu mayelana nezindawo zokudlela eziseduze, izitolo kanye nolwazi lokuthi yini ongayibona.